Igbo, John: Lesson 083 - Onye ngbapụ ahụ kpughere ma nwee nkụda mmụọ (Jọn 13:18-32) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 083 (The traitor exposed and disconcerted)
2. Onye ngbapụ ahụ kpughere ma nwee nkụda mmụọ (Jọn 13:18-32)
21 Ma mb͕e Jisus kwusiri nka, O we b͕a Ya àmà, si, N'ezie, n'ezie, asim unu, na otù onye nime unu gāraram nye. 22 Ndi nēso uzọ-Ya we legide onwe-ha anya;
Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya banyere ịhụnanya na ije ozi. Ọ na-anọchite anya ihe ịdị umeala n'obi na ịdị umeala n'obi n'ihu ha ma buru amụma na ọbụbụeze ya ga-enwupụta n'adịghị ike ka ha wee mara na ọ bụ Onyenwe anyị, onye ọrụ na onye nduzi nke ihe omume, ọbụna n'oge ọnwụ. Dị ka akụkụ nke nkọwa a, Jizọs kpughere aghụghọ Judas ma kwere ya nkwa nke mpụ ya, ka Judas wee ghara ime dịka atụmatụ ya si dị nanị ma n'ikwekọ na nlekọta nke eluigwe.
Jizos gwara ndi naeso ziya na otù nime ha kpebiri iziga ya na Nzuko nke ndi Juu. Nkwupụta a bịara dị ka ihe gbawara n'oge ememme obi ụtọ. Jizos ekwuputala nke a n'emeghi obi ojoo, ma ya onwe ya nwere nsogbu nime Mo Nso dika O no n'ili Lazarọs. Ọ na-eru újú karịsịa mgbe o chere na Nna ya ga-ahapụ ya. Jizọs hụrụ Judas n'anya ma họrọ ya; o yiri ka ọ gaghị ekwe omume na enyi a họọrọ ga-arara Ọkpara Chineke nye. Ọ bụ ezie na Akwụkwọ Nsọ na-ezo aka na nke a n'Abụ Ọma 41:9, "Onye na-eri nri m ebiliwo megide m."
Mgbe ahụ, ndị na-eso ụzọ nyochaa onye ọrụ ibe ya na-eche, sị, "Ọ bụ onye ọbọ?" Ha na-atụgharị uche banyere ma ọ ga-ekwe omume na onye ọ bụla ga-ezube ịrara onwe ya nye. Onye nke obula buru n'obi n'echiche nke ịhapụ Jisos ozugbo ọ ga - eme ihe na - eme ala na nlelị na ịjụ. Ha hụrụ onwe ha ka ha kpughere n'ihu ya, ihere mekwara ha, ha enweghịkwa ike iguzogide ule Chineke tupu nyochaa nke nyocha Jizọs.
23 Ma otù onye nime ndi nēso uzọ-Ya, onye Jisus huru n'anya, nọ na table, nātukwasi obi-Ya n'obi-Ya. 24 Ya mere Saimon Pita kpọrọ Ya òkù, si Ya, Gwa ayi onye Ọ nēkwu okwu bayere ya. 25 Ya onwe-ya we dakwasi Ya obi, si ya, Onye-nwe-ayi, ònye ka ọ bu? "26 Ya mere, Jizọs zara, sị:" Ọ bụ onye ahụ ka m ga-enye achịcha a mgbe m gwakọtara ya. "Mgbe o nyesịrị achịcha ahụ, o nyefere ya Judas, nwa Saịmọn Iskarịọt. 27 Mgbe achịcha ahụ gasịrị, Setan banyere n'ime ya. Jisus we si ya, Ihe i nēme, me ngwa. 28 Ma ọ dighi onye ọ bula nọ na table ahu mara ihe mere o ji gwa ya okwu a. N'ihi ụfọdụ, n'ihi na Judas nwere igbe ego ahụ, Jizọs gwara ya, sị, "Zụta ihe ndị anyị chọrọ maka oriri ahụ," ma ọ bụ na ọ ga-enye ndị ogbenye ihe. Ya mere mb͕e ọ natara ihe-oriri ahu, ọ pua ngwa ngwa. Ọ bụ n'abalị.
N'etiti ọgba aghara a nke sitere na nrara a ga-ewere ọnọdụ, anyị na-agụ ezi ịgba akaebe iji gosipụta obiọma. Jọn nọ n'akụkụ Jizọs. Onye nkwusa ozioma ekwughị aha ya na ozioma a, ma ọ na-ezo aka na nso ya dị nso n'ebe Jizọs nọ, ihe ịrịba ama nke ịhụnanya. O nweghị ihe ùgwù karịa Jizọs karịa ya. N'ebe a, o wepu aha ya, na-eto Ọkpara Chineke.
Pita na-eme ihere iji jụọ Jizọs kpọmkwem banyere onye snoogha ma ọ bụ otu oge enweghị ike ijide ya. Ọ gwara John ka ọ chọpụta onye onye ahụ bụ. John gbuuru Jisos wee jua, "Ònye ka obu?"
Jizọs zara ajụjụ a n'ụzọ dị jụụ, ọ bụghị ịkpọ onye na-abụrụ ya onye nra, kama ọ na-eji nwayọọ eme ihe. Jizos achoghi igosiputa onye ozo ahu n'ihu ọha n'oge a. Ọ bụ naanị ihe ga-eme ka Judas chegharịa. Jizos mebiri amara nke mere ka ya na ndi náeso zoya adinso ma tinyeye iheozo nime aroma nye ya Judas. Ebumnuche nke ihe a bụ iji wusi onye na-eso ụzọ ike ndụ ebighị ebi. Mana dika Judas zubere ka o raara onwe ya nye, nri ahu enwegh uru, kama o mere ka obi sie ya ike. Obi ya mechiri obi ya, Setan wee bata nime ya. Lee foto dị egwu! Site n'aka eze ya, Jizọs ga-eme ka ndị obi tara mmiri sie ike. Ka Jizọs nọ na-enye ya achịcha ahụ, Setan na-eche echiche ya. Mgbe ọ natara achịcha ahụ, ihe ọjọọ dakwasịrị ya. Jizos ikpé banyere onye nrara nyeghi ya nchebe Chineke wee nyefee ya n'aka Setan.Na mberede, Judas hụrụ onwe ya mgbe ọ na-ewere nri ahụ. Mgbe ahụ, ọchịchị Jizọs nyere ya iwu, "Egbula oge ime ihe ọjọọ gị, kama mee ya ngwa ngwa ka ihe ọjọọ mechie ụzọ ya, ihe ọma pụkwara ịpụta."
Ndị na-eso ụzọ Jizọs aghọtaghị ihe Jizọs gwara Judas ka o mee ngwa ngwa. N'ikpeazụ, ọ ga-agba ya ụgwọ ịzụta nri maka ụlọ ọrụ ahụ. John echefughị ihe atụ ahụ dị egwu nke Judas, na-esi n'ìhè nke ọnụnọ Kraịst gaa n'ígwé ojii.
31 Mgbe ọ pụrụ, Jizọs sịrị: "Ugbu a, e mewo ka Nwa nke mmadụ dị ebube, e mewokwa ka Chineke dị ebube site n'aka ya. 32 Ọ bụrụ na e me ka Chineke dị ebube n'ime ya, Chineke ga-enyekwa ya otuto n'ime onwe ya, ọ ga-enyekwa ya otuto ozugbo.
Olee otú e si nye Jizọs otuto site n'omume aghụghọ a? Kedu ka mkpụrụ ọma si esi na omume ọjọọ pụta?
Jizos wutere ya - mgbe onye ahê ahê ahê nke ohere ya wee rapeya. Ọ nọgidere na anya nke ịhụnanya ka onye na-arara azụ laghachi. Ma nke a mere ngwa ngwa gaa Council nke ndị Juu nke na-ebu ndị nche iji jide Jizọs n'abalị.Kraịst guzogidere ọnwụnwa ọnwụnwa nke ịghọ Mesaịa ndọrọ ndọrọ ọchịchị mgbe o zigara Judas ka ọ bụrụ onye a raara nye. Ọ họọrọ ịnwụ dịka Nwa-atụrụ Chineke, iji jiri obi umeala na adịghị ike gbapụta ụmụ mmadụ, na-ekwupụta ọnwụ ya na ịhụnanya ịchụ àjà bụ isi ihe dị ebube ya.
Jizos acho ghi otuto nke aka ya, kama otuto nke Nna ya n'ebube ya. Nna ya zitere ya n'ime ụwa ịzọpụta ndị furu efu. Ọkpara ah choro ime ka onyinyo nke Nna ya du icheiche nime mmadu dara ada. Maka mmeghari ohuru a Jizos kpughere Nna ya ma mee ka ha nwee okwukwe n'idi nma nna nke Chineke. Ọzụzụ naanị ezughị ezu, n'ihi na mmehie ejiriwo mepụta ihe mgbochi n'etiti Chineke na ihe ndị o kere eke. Okpara ahu aghagh inwu ka ewe mebie ihe mgbochi a nke nawapu ayi na Chineke, ihe ndi choro nke ezi omume geme kwa. Ọnwụ Kraịst bụ isi ihe na-eme ka aha Nna ahụ dị ebube. Enweghị ọnwụ ahụ, enweghi ezi ihe ọmụma banyere Nna, enweghị nnabata iwu, ma ọ bụ ezi mmeghari ohuru.
Mgbe Kraist ghoro onwe ya, ebe onwu ya gaenye otuto nye Nna ya, ya onwe ya kwuputara na Nna ya ga-awukwasi ya otuto ya, ya mere o ga-abu isi nke onyinye nile di ebube. N'ime awa ole na ole tupu ejide ya na obe n'obe, Jizos huru oke ozo na nelu igwe. Kraist aghagh inwu ibia n'ebube ya.
Ndia nile nasi aru na onwu nke Kraist,ma oburu na ha bu ihe siri ike, ha amagh nma Ochicho nke Chineke ka ekwuputa n'elu obe, na nwa nke nwoke, onye mebiri ili. O gosiputara ebube-ya n'elu ebe-ichu-àjà Chineke ebe o nwuru n'ihe nile, ka ndi nile kwere na ya we buru ndi ezi omume.
EKPERE: Nna, Ọkpara na Mmụọ Nsọ, anyị na-ebuli gị elu maka nzọpụta, ịdị umeala n'obi na nhụjuanya, ọnwụ na mbilite n'ọnwụ gị. Anyị kwenyere na ọbara Kraịst gbapụtara anyị. Anyị na-enye gị otuto site n'ike mmụọ nsọ. Ị zọpụtala anyị n'etiti nsogbu na ihe ize ndụ nke ndụ. Ndụ ị na-enye anyị bụ ebighi ebi. Anyị kwenyere na Ọkpara gị ga-apụta n'oge na-adịghị anya n'ebube. Amen.
Gịnị bụ nkọwa nke ebube Jizọs gosipụtara mgbe Judas hapụrụ ya?
Page last modified on March 05, 2020, at 06:30 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)